निताले लगाएको ‘गाउन’को मुल्य कति ? – Mero Film
निताले लगाएको ‘गाउन’को मुल्य कति ?
२०७५ जेठ १३ गते १३:०९
नेपाली हिरोइनहरु हरेक कार्यक्रममा भिन्न भिन्न ड्रेसअपमा उपस्थित हुन्छन । उनिहरुको पहिरनले उती चर्चा पाउँदैन । तर, उनीहरुको चर्चा तब हुन्छ जब त्यहि ड्रेसले उनिहरुलाई धोका दिन्छ । अथवा भनौँ जब उनिहरु ‘वार्डरोप मालफक्सन’को शिकार बन्छन ।
तर, केही दिन अगाडी सम्पन्न एक अवार्ड समारोहमा नायिका निता ढुंगानाको ड्रेसको निकै चर्चा भयो । उनले लगाएर आएको गाउन आकर्षण केन्द्र बन्यो । उनले सो अवार्डमा उत्कृष्ट नायिकाको अवार्ड समेत प्राप्त गरिन ।
उत्तम बनेपालीद्वारा डिजाइन गरिएको उक्त ट्रेडिसनल गाउनको मुल्य कति होला ? धेरैको मनमा प्रश्न छ । नितालाई हामीले जिज्ञासा राख्यौँ, कति पर्यो ड्रेसको ? उनले भनिन ‘पैसा आफ्नो ठाउँमा छ, म हरेक कार्यक्रममा जाँदा सजिएर नै जान्छु’ ।
उक्त गाउन बनाउन कति दिन लाग्यो होला त ? डिजाइनर बनेपालिले भने, ‘३-४ दिन’ ।
‘यो पहिले मैले लेहेङ्गा बनाएको थिएँ । पछि निताजीले मलाई दाइ एक अवार्ड कार्यक्रमका लागि ड्रेस बनाइदिनु पर्‍यो भनेर फोन गर्नु भयो ४-५ दिन अगाडी । अनि त्यही लेहेङ्गालाई मोडिफाई गरेर लेहेङ्गाको माथि नेट जोडेर उक्त गाउनको डिजाइन गरेँ’, बनेपालीले भने ।
गाउनसँगै उनले शिरमा क्राउन लगाएकी थिइन । निताले उक्त गाउनको मूल्य बताउन नचाहे पनि डिजाइनर बनेपालीले भने उक्त ड्रेसको मूल्य बताए । उनको जवाफ थियो २५,००० (पच्चिस हजार) ।
फिल्म बाबरी’को गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा जे देखियो (फोटो फिचर)
१५ लाख बढि खर्च भएको फिल्म ‘झिँगेदाउ’को गीतमा नाचिरहेका कलाकार (फोटो फिचर)
७२ औं जन्मदिनको केक काट्दै मदनकृष्ण (फोटो फिचर)
‘धाकड’ गर्ल बोल्ड स्टाइलमा (फोटो फिचर)
यस्तो देखियो वर्षा सिवाकोटीको मेहेन्दी सेरेमोनी (फोटो फिचर)
केकीको मेहेन्दी सेरेमोनी तस्विर सार्वजनिक (फोटो फिचर)